वंशावली हेर्ने तरिका – गौतम वंशावली
प्रस्तुत गौतम वंशावलीमा अकारादि वर्णानुक्रमअनुसार ती जिल्लामा रहेका र त्यहाँबाट पनि अन्य जिल्लामा फिँजिएका गौतम बन्धुहरूका नाम–नामावली रहेका छन् । आफ्नो मूल वंशको पहिचान गरेर पनि वंशावलीमा आफ्नो नामसम्म पुग्न सकिन्छ ।
वंशावलीमा गौतम वंशका पुस्तौनी नामहरू तालिकामा दिइएका छन् । वंशतालिकामा जम्मा सात कोठा छन् । शिरवेहोरामा क्रमैले (१) क्र.स., (२) नाम, (३) पुस्ता नम्वर,(४) पिताको क्रमसंख्या,(५) छोरा, (६) छोरी,(७) पुत्रको क्रमसंख्या गरी सात कोठा रहेका छन् । पहिलो कोठामा सुरुदेखि सिलसिलेवार क्रम संख्या दिइएको छ । यसले दोस्रो कोठाको नामलाई सङ्केत गर्छ । र यही क्रमसंख्या नै पछि आउने नामको पिता पहिचान्नका लागि पिताको क्रम संख्या बनिदिन्छ । यसै गरी त्यही तालिकामा पुत्रको क्रमसंख्या पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस क्रम संख्यामा हेरेपछि पुत्रको र त्यस्तै गरी उसका सन्तानका बारेमा थाहा हुन्छ । तेस्रो कोठाको नम्बर चाहिं कति पुस्ता भनेर चिनाउने पुस्तासंख्या हो । जस्तै ः–
पिताको क्रमसंख्या (४)
उपरोक्त तालिकामा पाना नं. को क्रमसंख्या ३०५ मा शिरपति वंशका हरिलाल तथा निजकी पत्नी लक्ष्मीदेवी
(पोख्रेल) को नाम कोठा नं. २ मा छ,( ) भित्रको पोख्रेलले लक्ष्मीदेवीको माइतीको थर जनाउँदछ । हरिलालको पिताको नाम के हो भनेर जान्नका लागि चौंथो कोठाले सङ्केत गरेअनुसार शिरपति वंशको क्र.स. २९६ मा हेर्नुपर्दछ । त्यहाँ कोठा नं. २ मा छविलाल भेटिने छ र छविलाल नै हरिलालका पिता हुन् भन्ने जनाउँदछ भने क्र. सं. २९६ कै पाँचौ कोठामा हरिलाललाई भेटिने छ । यसले हरिलालका शाखा–सन्तानहरू क्र.सं. ३०५ मा छन् भन्ने जनाउँदछ । तेस्रो कोठाको ४४ ले हरिलाल मूलपुरुष ऋतुभद्र पुस्ता नं. १ वाट पुस्ता नं. ४४ (चवालीसौं) पुस्तामा रहेको जनाउँछ । यसैगरी पाँचौ कोठामा रहेका ४ जनाका नामले हरिलालका छोराहरू ४ जना रहेछन् भन्ने जनाउँछ । छैठौं कोठामा रहेको २ नाम तथा थरले हरिलालको २ छोरीहरू विवाहित भएको जनाउँदछ । सातौ कोठाका संख्याहरूले पाँचौं कोठाका व्यक्तिहरूका सन्तानको खोज गर्ने काम सो क्रमसंख्यामा गर्ने जनाउँछ । हरिलालका ४ छोराहरूमध्ये रामचन्द्रका सन्तान खोज्नलाई शिरपति वंशकै क्र्र.सं. ३०६, टिकारामका ३०८ तथा खेमलालका ३०९ मा भेटिने छ । महेश्वरका अगाडि सातौं कोठामा नम्बर नभएकोले निजको वंशक्रम अगाडि नबढेको जनाउँछ । तर कतिपय अवस्थामा ७ औं कोठा खाली भएमा कोठा नं. २ मा उल्लिखित व्यक्तिको सन्तानहरु अन्यत्र जिल्ला अथवा अलग्गै रुपमा अन्यत्र पनि दिइएको हुन सक्दछ । यस्तो अवस्था खास गरी अलग अलग गरी प्राप्त विवरणलाई समावेश गरिएको कारणबाट पनि पर्न गएको छ । यस्तो स्थितिमा नाम र पुस्ता समेत मिलाउनु पर्छ । यसरी एउटै तालिकाले आफ्नो पिताको, छोरा, छोरीको गरी तीनपूस्ते विवरण दिन्छ र तह–तह हुँदै सुरूदेखि अन्तिम पुस्तासम्म जानकारी प्राप्त हुन्छ ।
साथै मूलपुरुष ठम्याउन वंशवृक्ष तथा वंशलता (कोठे तालिका) ले मद्दत पुयाउँछ । वृक्षको पातको सामुन्नेबाट हाँगासम्म रहेको कोष्ठरहित अंकले वंशावली तालिकाको पानालाई जनाउँछ भने कोष्ठभित्रको अंकले पुस्ता नम्वरलाई संकेत गर्दछ । वंशवृक्ष एवं लताको सहयोगबाट पुस्ता नं. १ एकसम्म पुग्न र आफ्नो सबै नाता सम्बन्ध जोड्न सकिने व्यहोरा आदरणीय गौतम वन्धुहरूमा जानकारी गराइएको छ ।
Previous Previous post: जिन्सी एवं नगद सहयोग विवरण
Next Next post: अर्घाखाँची